PressRush: Madal Loogu Tala Galay Akhlaaqda wanaagsan ee Wacyigelinta Suxufiga | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 31, 2015 Isniin, Janaayo 21, 2019 Douglas Karr
Maalin kasta waxaan ku helayaa daraasiin garoonkayga sanduuqa sanduuqa. Qaar badan oo iyaga ka mid ah si liidata ayaa loo qoray, badankood kuma khuseeyaan boggeyga, laakiin had iyo jeer waxaa jira nugget dahab ah oo ku jira tuubada 'spam spam' markaa waan fiirsanayaa. Waxaan helay isbuucaan gudihiisa halkaasoo e-maylku waxoogaa ka yara duwan yahay oo wuxuu igu siiyay khibrad wanaagsan.
Waxaan jecelahay fursaddan inaan ku wargaliyo shirkadda xiriirka dadweynaha dhamaadka dhinaca saxda ah ee garoonka. Haddii aan jeclaan garoonka (oo ka hooseeya badhannada), waxaan si fudud ugu qasbay inaan ka jawaabo cinwaanka emaylka uu ka yimid. Waa maxay habka cajiibka ah iyo edeb leh ee loogu talagalay xirfadleyda xiriirka bulshada si loo hubiyo inay ku habboon tahay saameynta ama baloog-waraha ay la xiriirayaan.
Intii aan ka jawaabayay garoonka gaarka ah, waxaan sidoo kale hubiyay barxadda ay ku qoran tahay - Cadaadis. Pressrush, waxaad ku dhisi kartaa digniino ku saabsan mowduucyada, waxaad abuuri kartaa garoonno, saameyn cilmi baarisyo, waxaadna horumarin kartaa liisaska gaarka ah ee aad u dirto. Markii gaagaabanna la diro, waxay adeegsadaan habka aan kor ku tilmaamay.
Waxaan aad u aaminsanahay in xalka uusan aheyn in la diro barxado badan. Xalku waa in la dhiso xiriiro waara oo ka bilaabma shaqsi, si fiican loo baaray, si weyn loo bartilmaameedsaday, iyo in si sax ah loo gaarsiiyo waqtigeeda. PressRush, waxaan u dhaqaaqay inaan dhiso aalad kaa caawineysa inaad sidaa sameyso. Ville Laurikari, Aasaasihii Pressrush.
Dhisidda liistada waa mid fudud iyadoo la adeegsanayo mashiinka wax lagu raadiyo gudaha ee Suxufiyiinta. Waa kan natiijada falanqayn iyo cabir, meesha aad runta ka hesho:
Oo haddaad gujiso boggeyga, waxaad heli kartaa dhammaan qoraalladii ugu dambeeyay ee aan daabacay oo ay weheliso xiriiriyeyaasha boggeyga bulshada iyo cinwaanka emaylka.
Bartilmaameedyada waxaa lagu sifeyn karaa da'da, goobta iyo daabacaadda. Waxaa sidoo kale lagu kala sooci karaa iyadoo la tixraacayo ama la tixgelin karo. Markaad dib u eegis ku sameyso wariye kasta, waxaad ku dari kartaa liistada warbaahinta gaarka ah ee la soo dejisan karo ama la dhigi karo. Waxa ugu wanaagsan oo dhan, sida macluumaadka xiriirka loola beddelo, liisaskaaga waa la cusbooneysiiyaa.
Saxiix U Saxeex Maxkamad Cadaadis
Tags: gaarsiinta bloggerSaxaafaddawacyigelingaarsiinta emaylkaraadinta fidintariixVille Laurikari